Semalt विशेषज्ञ: सेयर गर्न योग्य सामग्री सिर्जना गर्न को रहस्य
सामग्री मार्केटिंग एक दर्शकको अगाडि सामग्री प्राप्त गर्न एक प्रभावी तरीका हो। जे होस्, सामग्री साझा गर्नु भनेको शीर्ष डिजिटल प्रवृत्ति मध्ये एक हो, अधिक व्यक्ति यसमा के समावेश छ भनेर अनजान देखिन्छ। कुञ्जी सामग्री विकास गर्न को लागी साझा गर्न पर्याप्त मूल्य छ।
एन्ड्र्यू डायहान, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक को लागी निम्नलिखित दस सुझाव प्रस्तुत गरीएको छ कुनै पनि व्यक्ति लाई साझा योग्य सामग्री प्राप्त गर्न मद्दत गर्न।
१. वास्तवमै उत्कृष्ट सामग्री
व्यक्तिले सामग्री साझेदारी गर्ने एक मात्र तरिका हो यदि तिनीहरूले त्यसमा मान फेला पार्न सक्दछन्। यस सन्दर्भमा उत्कृष्ट सामग्री प्रासंगिकता र गुणवत्ता संयोजन संयोजन। सामग्री लक्षित दर्शकहरूको लागि अत्यधिक प्रासंगिक हुनुपर्दछ, र उच्च स्तरको गुणवत्ताको साथ।
२.बाईट साइज वर्क्स सर्वश्रेष्ठ
कि त धेरै प्राविधिक छ वा गहिराईमा पाठकहरु वा दर्शकहरु लाई हराउँछ यसैले शेयर दरहरु लाई कम गर्दछ। सामग्री लामो हुन सक्छ, तर पाठकहरूले पनि यसलाई पचाउन योग्यको फेला पार्न आवश्यक छ। यसको शीर्षमा, यसको स्पष्ट शीर्षक र संक्षिप्त सारांश हुनुपर्दछ। लामो पाठहरु को बारे मा कुरा गर्दा, ती पढ्न को लागी वर्गहरु मा तोडिनु पर्छ।
गहिराइमा डुबुल्की लगाउनुहोस्
सामग्री मार्केटरहरू उनीहरूले लेख्ने सामग्रीमा गहिरो अनुसन्धान गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरी यदि एक दिएका विषयको बारेमा अर्कोलाई शिक्षा प्रदान गर्न कोशिस गर्दै छ, जसले प्रश्नमा प्रासंगिकता पनि ल्याउँछ। यदि व्यक्तिले जानकारी साझेदारी गर्ने हो भने, यसले विशिष्ट प्रश्नको जवाफ दिनै पर्दछ, विस्तारै, यसलाई सानो पढ्न योग्य अंशहरूमा विभाजन गर्न सम्झना।
Vis. दृश्यहरू समावेश गर्नुहोस्
हब्स्पटबाट तथ्या .्कहरूले संकेत गर्दछ कि दृश्य सामग्रीले सामाजिक मिडियामा बढी संलग्नता प्राप्त गर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि एकले चित्रकार प्राप्त गर्नु पर्छ वा सामग्रीमा सबै कुराको लागि जानकारी ग्राफ बनाउनु पर्छ। यसको सट्टा, सामग्री दृश्य हेडिंग फोटो मात्र वा सामग्रीसँग प्रासंगिक थम्बनेल थपेर अपील गर्नुपर्दछ।
Sur. आश्चर्यको ड्यास थप्नुहोस्
सामग्री मार्केटरहरूले चौंकाउने, तर ज्ञानवर्धक सामग्रीमा मान खोज्नुपर्दछ। यदि सामग्री एक सही तरिकामा झटका प्रयोगकर्ताहरूलाई अगाडि राख्न चाहान्छ भने, त्यहाँ त्यस्तो ठूलो सम्भावना छ कि यसले सेयरहरू प्राप्त गर्दछ।
Info. जानकारी-ग्राफिक्सको ठूलो मूल्य छ
जानकारी-ग्राफिक्स न त सजिलो छ न बनाउन सस्तो। जे होस्, यदि कसैले उनीहरूको सामग्रीमा केही प्रयोग फेला पार्न सक्दछ भने, त्यसोभए उनीहरूले सामग्री साझा गर्न प्रयोग गरेको रणनीतिको प्रमुख अंशको रूपमा काम गर्छन्। तिनीहरू दृश्य हो, यसलाई बुझ्न सजिलो छ, र कहिलेकाँही सामग्रीको "वाह" पक्ष प्रस्तुत गर्दछ। जानकारी-ग्राफिक्सले सारांश प्रस्तुत गर्दछ कि सामग्री बजारले के कुरा गर्छ, र यदि उनीहरू यसलाई पर्याप्त रोचक बनाउँदछन् भने, प्रयोगकर्ताहरूलाई साझेदारी गर्न सजिलो हुन्छ।
Analy. विश्लेषणात्मक हुनुहोस्
सामग्री बजारहरूले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तिनीहरूले प्रत्येक चीज ट्र्याक गर्छन्, र उनीहरूको सामग्रीले प्राप्त गरेको सेयरहरूको संख्या। नयाँ सामग्री सिर्जना गर्ने एउटा तरिका अघिल्लो रणनीतिको नतीजामा आधारित हुनु हो। विगतमा एक सफल रणनीति बनाउँदा नयाँ सामग्रीमा सफलता सुनिश्चित हुन्छ। विश्लेषणात्मक प्राप्त गर्न यसले व्यावसायको लागि के काम गर्छ भनेर हेर्नको लागि सम्भव बनाउँदछ।
Hum. हास्य समावेश गर्नुहोस्
कहिलेकाँही सामग्री हास्य गर्न हास्य कडा छ। जबसम्म कसैसँग ठुलो हास्य हुँदैन र श्रोतालाई बुझ्दछ र तिनीहरूलाई केमा अपील गर्दछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, एक मार्केटरले हास्यबाट बच्न वा कम से कम यसलाई राख्नु पर्छ। खातिर हास्यास्पद चीजहरू बनाउँदा फ्ल्याट लाग्न सक्छ र दर्शकको नोक्सान हुन सक्छ।
Gen। वास्तविक सामग्री
यदि एक पाठक आधारमा अपील गर्न गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न चाहन्छ भने, तिनीहरूले सम्पूर्णतामा त्यसो गर्नै पर्छ। व्यक्तिले सामग्रीबाट बिक्री पिचहरू सुन्न सक्छन्। यो धारणा सिर्जना गर्दछ कि एकको एक अल्टेरियर एजेन्डा छ जसले ल्यान्डफिलको परिणाम दिन्छ। व्यक्ति इमानदारी इनाम दिन्छ र वास्तविक सामग्री साझा गर्न को लागी प्यार गर्दछ। तिनीहरू कम्पनीहरूबाट सामग्री पनि अलग गर्दैनन्, जबसम्म तिनीहरू अगाडि र इमान्दार छन्।
१०. कार्यमा कल गर्नुहोस्
सामग्री बजारहरूले उनीहरूको सामग्री साझा गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ, विशेष गरी यदि यो तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा अवस्थित छ। उनीहरूले सामाजिक बटनहरू थप्न सक्दछन्, साझेदारी गर्ने क्षमता हाइलाइट गर्न सक्दछन्, वा यदि उनीहरूलाई यो मनपर्‍यो भने साझेदारी गर्न मानिसहरूलाई सोध्नुहोस्। यो एक सरल कार्य हो कि सामग्रीको लागि चमत्कार गर्न सक्छ।
बोनस: श्रोताको साथ अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्
बजारमा सामग्री रिलीज गर्न लेखक संलग्न हुनु पर्छ। यसले सामग्रीको जीवन चक्र विस्तार गर्ने प्रभाव पार्छ। प्रक्रियामा, सामग्री विपणकहरूले उनीहरूको श्रोताको साथ अर्थपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दछ। यस्तो निकटताको साथ, तिनीहरूले भर्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ खाली गर्न यो सजिलो हुन्छ।
दस पोइन्टले चेकलिस्टको रूपमा कार्य गर्दछ। एकलाई उनीहरूको सामग्री एकैचोटि सबै सुझावहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन। जे होस्, यदि सामग्रीले सूचिमा केहि पोइन्टहरू प्राप्त गर्दछ भने, यसको पाठकहरूले यसलाई साझेदारी गर्ने उच्च सम्भावना छ।